BBC Afaan Oromo – Local Insight - Page 4
‘Eenyuun dhaalchisuuf hojjetta, siilaa dhalahoo hin qabduu siin jedhu’ – maatii waggaa 18 booda ilmoo argatan
May 2, 2022 BBC Afaan Oromoo
Abbaan warraa fi haati warraa kuni erga bulti ijaarratanii jireenya waliinii eegalanii amma waggootni 18 lakkaa’amaniiru. Waggoota 18 darbe waliin jiraatan kana keessatti garuu dhala hin godhanne. click here to read original article...
Koronaavaayirasii: Akkatti weerarri addunyaa siyaasa Itoophiyaa hube
Weerarri Koronaavaayirasii addunyaa waliin gaheefi yaaddessee ture Itoophiyaaf yaaddoo dabalataa dhiisee darbeera. Koronaavaayirasiin fayyaafi dinagdeen ala haala siyaasaa Itoophiyaa akkamiin hube? click here to read original article...
Bulchiinsi waraanaa Giinii waggoota sadii keessatti aangoo siiviiliittan dabarsa jedhe
May 1, 2022 BBC Afaan Oromoo
Motummaan Waaraan Giinii baatii ce'umsaa 39 booda aangoo bulchiinsa siiviiliittin dabarsa jedhe. click here to read original article...
Pool Ruusesabagina: Maatiin gooticha Hoteela Ruwaandaa himata $400m UStti banan
Maatiin Pool Ruusesabagina mootummaan Ruwaandaa ukkaamsaa fi dararaa isa irraan gahe jedhaniif himata banan. click here to read original article...
Dirooniin attamiin kunuunsa fayyaa Indiyaa geedaraa akka jiru
Dirooniin sirna kunuunsa fayyaa Indiyaa jijjireera garuu ammoo oggeessoonni indastiriin diroonii omishuu yaaliiwwan dabalataa akka gaggeessuuf waammicha taasisaa jiru. click here to read original article...
Bakka bu’aan taphattoota kubba miilaa bebbeekamoo Miinoo Rayoolaan ganna 54’n du’aan boqotan
Bakka bu'aan taphattoota bebbekamoo akka Pool Poogbaa, Erling Haalaandii fi Maatis De Laayit ganna 54'n du'aan adunyaa irraa boqatan. click here to read original article...
Neel Paarish: Gocha maraatummaa fiilmii saal-quunnamtiin daawwachuun booda hojii koon gadhiise
Neel Paarish mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti bilbilaanaa fiilmii saal-qunnamtii (porn) ilaalaa turuusaa amanuun nama gaarii hin turre jechuun BBCtti himan. click here to read original article...
Shamarree Salaamaawwiit miidhaa asiidiirraa lubbuun ooltus ammas yaaddoo qabaachuu himti
Salaamaawiitti Hunanyaa shamarree waggaa 24 yoo taatuu, ogummaa faarmaasitiin eebbiifamuun faarmaasii dhunfaa tokko keessatti mindeefamuun hojjataa turte. Naannoo Amaaraa Aanaa Hulati Ijju Inaseetti jiraattuu magaalaa Qaraaniyoo kan taate Salaamaawiiti nama Yihenawu Fantaa jedhamuun miidhaan asiidii irra gahee ture. Ammas namuma kanaan isheefi maatii isheerra dorsiisoon gahaa jiraachu dubbatti. click here to...
Jarmaniin himannaa beenyaa bara Naaziitiin walqabatee Xaaliyaanii mana murtii UNtti Adunyaatti himatte
Jarmaniin qabeenyaawwan Xaaliyaanii keessaa qabduu beenyaa yeekka waraanaa Naaziitiif jecha jalaa qabame akka dhaabbatu barbaaddi. click here to read original article...
Awwaalcha jumlaa Maaliitti argame irratti himannaan Faransaay maali ture?
Faransaayi loltoonni ishee saaxilamtoota duula maqaa balleessoo garee ergamtoota Raashiyaa ta'an jetti. click here to read original article...
ዉይይት፣ የሰዉ ዋጋዉ ስንት ነዉ?
June 26, 2022 DW´s Amharic News